चुनाव कि पुनस्थापना ? ग्राण्ड डिजाइन नै हाे त ? - नेपालबहस
चुनाव कि पुनस्थापना ? ग्राण्ड डिजाइन नै हाे त ?
१० फागुण २०७७ | १४:१४:०३ मा प्रकाशित
१० फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाई आजबाट औपचारिक रुपमै पूरा भएको छ । सरकारी पक्षले आज बेञ्चसमक्ष बहस नोट बुझाएपछि कुनैपनि क्षण यसको फैसला आउन सक्छ । फैसला कस्तो आउला त ? धेरैको अनुमान छ–प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुन्छ ।
अस्ती शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको भाषणपछि पुनस्थापना हुने सम्भावना बढेको ठान्नेहरु धेरै छन् । किनभने प्रधानमन्त्री जस्तो मानिसले नै पुनस्थापना भए आन्दोनल गर्ने धम्की दिएका छन् । केही न केही सुइँको पाएरै हुनुपर्छ ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भन्ने धारणा धेरैले राखेका छन् ।
तर ओलीको बोलीलाई मात्रै आधार बनाएर एउटा धारणा बनाउनु अलि हतारै हुनसक्छ । किनभने ओलीले गरेको विघटनलाई ठूलै षडयन्त्रको श्रृँखलाका रुपमा लिनेहरु पनि छन् । ग्राण्ड डिजाइन अन्तर्गत गरिएको भए सदर हुने सम्भावना पनि छ । त्यसैले रामचन्द्र पौडेलले गरेको ठोकूवा र ओलीको धम्कीबीच कुनै सम्बन्ध छ/ छैन त्यसको छिनोफानो अबको केही दिनमै हुनेछ ।
त्यसैले देउवा भने पुनस्थापना भन्दा चुनावमै जान सक्दा लामो समयका लागि कांग्रेस सत्तामा रहन सक्ने अवस्था निर्माण हुने तर्क गरिरहेका छन् । उनी निकटहरुलाई भन्ने गर्छन्–पुनस्थापना भयो भने कांग्रेस तेस्रो शक्तिमा रुपान्तरित हुनेछ । साथै, कुनैपनि बेला दुबै कम्युनिष्टहरु फेरि एकीकृत हुनसक्ने सम्भावना समेत रहनेछ । त्यसैले चुनावले मात्रै नेकपालाई स्थायी रुपमा विभाजित बनाउने छ ।
पुनस्थापना भएपनि नभएपनि अब देश अस्थिरतातर्फ लम्किएकै हो । किनभने जस्तोसुकै अवस्थामा पनि अब देशको राजनीतिक परिदृश्य फरक हुनेवाला छ । त्यसैले अबको परिघटनालाई दुबै कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । मानौं पुनस्थापना भयो भने के होला ? गठबन्धन सरकार बन्ला त ? कांग्रेसको पौडेल पक्ष र नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्ष भन्छ – गठबन्धन बनाएर ओली सरकारलाई बिदावारी गर्नुपर्छ ।
त्यसका लागि कांग्रेसलाई नै प्रधानमन्त्री दिन तयार रहेको प्रचण्डले बताइसकेका छन् । अर्कातिर ओली पक्षले पनि यस्तो अवस्था आयो भने देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएरै भएपनि प्रचण्ड–माधव पक्षलाई धुलोपिठो बनाउने चाहना छ । देउवा स्वयं यही चाहन्छन् । उनी प्रचण्ड–माधव पक्ष भन्दा ओलीसँगको गठबन्धन नै कांग्रेसका लागि लाभदायक हुने ठान्छन् । जबकी पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष भने ओलीसँग कुनै हालतमा पनि गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा अडिग छन् ।
यसरी कांग्रेस भित्रको दुईलाइन द्वन्द्वले ठूलै चिरा पर्ने अवस्थासमेत आउन सक्ने देखिएको छ । त्यसैले देउवा भने पुनस्थापना भन्दा चुनावमै जान सक्दा लामो समयका लागि कांग्रेस सत्तामा रहन सक्ने अवस्था निर्माण हुने तर्क गरिरहेका छन् । उनी निकटहरुलाई भन्ने गर्छन्–पुनस्थापना भयो भने कांग्रेस तेस्रो शक्तिमा रुपान्तरित हुनेछ । साथै, कुनैपनि बेला दुबै कम्युनिष्टहरु फेरि एकीकृत हुनसक्ने सम्भावना समेत रहनेछ । त्यसैले चुनावले मात्रै नेकपालाई स्थायी रुपमा विभाजित बनाउने छ ।
चुनाव भएपनि वा पुनस्थापना भएपनि राजनीतिक रुपमा नेपाल फेरि द्वन्द्वमै अग्रसर भइसकेको छ । त्यसलाई जोगाउन अब कसैले सक्नेवाला छैन । अबको राजनीतिक परिदृश्य नै बढो खतरनाक देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसले चुनाव होला र बहुमत ल्याउँला भन्ने कल्पना गर्नु राजनीतिक मूर्खता पनि हुन सक्छ ।
अर्कातिर चुनाव हुँदाका अवस्थालाई राम्ररी चिरफार गरौं । चुनाव हुँदा कांग्रेस सभापतिले भनेजस्तो सबै ठाउँमा फाइदा हुने अनुमान गलत सावित हुन सक्छ । किनभने ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षबीचको तिक्तता कार्यकर्ता तहबाट कम गर्ने पहल नहोला भन्न सकिन्न । सबैभन्दा गाह्रो अवस्था त निर्वाचन आयोगले नै बनाउने अवस्था छ । किनभने आयोगको मन ओलीतिर छ, तर सबूद प्रमाण अर्कातिर फर्किएको छ । त्यसैले आयोगले पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिह्न फ्रिज गर्न सक्छ । कदाचित अदालतले विघटन सदर गर्ने र आयोगले ओली र प्रचण्ड नेतृत्वकै नेकपालाई आधिकारिक भन्न छाडेन भने फेरि पनि ओलीकै हालीमुहाली हुने छ ।
ओलीले चाहेका मानिस नै पार्टीको आधिकारिक उमेदवार हुने स्थिति हुनसक्छ । जसले गर्दा कांग्रेसले चाहेको जस्तो वातावरण नबन्न सक्छ । किनभने ओली नेतृत्वको चुनाव प्रचण्ड र माधव नेपालले लड्ने कुरै भएन । त्यसले राजनीतिक द्वन्द्व खडा गर्ने छ र फेरि सडक आन्दोलनले देश खरानी बन्ने अवस्था आउने छ । त्यो स्थितिमा कांग्रेस सबैभन्दा बढी क्षतिग्रस्त हुने अवस्थामा पुग्ने छ ।
निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा ओलीको रहर हैन । किनभने उनले अहिलेको हैसियत कम्तिमा अबको चुनावमा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । विभाजित पार्टीको नेतृत्वमा हुने निर्वाचन जित्ने कुरा पत्यारिलो होइन । साथै त्यो अवस्था आउला भन्ने कल्पना कांग्रेस नेतृत्वले गर्न सकेको देखिंदैन । केवल निर्वाचन हुने र विभाजित नेकपाको राजनीतिक लाभ उठाउन पाइने कल्पनामै देउवाको सपना रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
यसरी हेर्दा अबको बाटो सहज छैन । चुनाव भएपनि वा पुनस्थापना भएपनि राजनीतिक रुपमा नेपाल फेरि द्वन्द्वमै अग्रसर भइसकेको छ । त्यसलाई जोगाउन अब कसैले सक्नेवाला छैन । अबको राजनीतिक परिदृश्य नै बढो खतरनाक देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसले चुनाव होला र बहुमत ल्याउँला भन्ने कल्पना गर्नु राजनीतिक मूर्खता पनि हुन सक्छ ।
बरु दुई विकल्पमा कुन चाहिं न्यून क्षति हुने हो त्यसैमा जाने पहल गर्नु उचित हो । अहिलेलाई हेर्दा चुनावको गुलियोमा भुल्नु भन्दा पुनस्थापनापछिको अस्थिरतामा रुमल्लिनु चाहिं कम क्षति पुग्ने विकल्प हुने देखिएको छ । त्यसैले थोरै क्षति पुग्ने विकल्पतिर ढल्कँदा कांग्रेस र प्रजातन्त्र बलियो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
देउवा –राजदूत भेटघाट १५ मिनेट पहिले
पार्टीको आधिकारिक धारणा नेताहरूबाट बुझ्‍न श्रेष्ठकाे आग्रह १ घण्टा पहिले
वडा कार्यालयको नयाँ भवन बन्ने २ घण्टा पहिले
सप्तरीबाट स्रोत नखुलेको १० लाखसहित दुई महिला पक्राउ ३ दिन पहिले
अपि पावरले ५६ करोडको हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न माग्यो अनुमति ३ दिन पहिले
हुवावेद्वारा फोल्ड गर्न मिल्ने तेस्रो मोबाइल फोन सार्वजनिक ३ दिन पहिले
भियतनाममा कम्युनिष्ट पार्टीको प्रमुखमा पुनः निर्वाचन ४ हप्ता पहिले
आध्यात्मिक जागरणसँगै निम्बार्क सम्प्रदायको विस्तार गर्ने ३ हप्ता पहिले
आज सुन तोलामा एक सय रुपैयाँ सस्ताे २ हप्ता पहिले
प्रहरीका १२१ जवान हवल्दारमा बढुवा सिफारिस [ सूचीसहित ] १ हप्ता पहिले
देशैभर बदली : २४ घण्टामा ११ को मृत्यु, १२ जना घाइते ७ महिना पहिले
बागलुङमा तिहारका देउसीभैलो खेल्न नपाइने ४ महिना पहिले